Inona no tena dikan'ny vato mangatsiaka nataon'i Steve Austin Austin? - Wwe
Inona no tena dikan'ny vato mangatsiaka nataon'i Steve Austin Austin?
Andianteny iray izay nihoatra ny zava-drehetra fantatry ny fialamboly ara-panatanjahantena.
Andianteny iray namaritana fa tsy ny asan'ny iray amin'ireo Superstars lehibe indrindra an'ny WWE hatrizay, fa ny iray namaritra vanim-potoana iray manontolo amin'ny tolona matihanina. Andian-teny mahaliana izay, mandraka androany, dia tompon'andraikitra amin'ny ampahany lehibe amin'ny varotra varotra WWE sy ny sarin-teny izay mety sy tsy mety maty, amin'ny lafiny rehetra amin'io teny io.
Fa inona no tena dikan'ny Stone Cold Steve Austin's 3:16?
Ireo mpankafy an'i Cold Cold Steve Austin dia mety mahafantatra tsara ny niandohan'ny fehezanteny mahaliana, fa anio dia handinika lalina kely momba izany isika.
Stone Cold Steve Austin, izay vao avy nanala ny fiarahany tamin'i Ted Dibiase, dia nandray anjara tamin'ny fifaninanana King of the Ring tamin'ny 1996. Ny 23 jona ny lalao manasa-dalao sy famarananard, 1996 tao amin'ny MECCA Arena any Milwaukee, Wisconsin.
Taorian'ny nandresen'i Austin an'i Marc Mero tamin'ny lalao manasa-dalana tamin'ny fifaninanana dia nihaona tamin'i Jake the Snake Roberts izy tamin'ny lalao famaranana. Resin'i Roberts teo aloha i Vader tamin'ny alàlan'ny fanilihana.
Ankehitriny i Jake Roberts, izay niavaka indrindra tamin'ny toetrany mahafinaritra taloha tamin'ny WWE, dia niverina tany amin'ny orinasa niaraka tamin'ny gimikà mpitory. Ilay tsikombakomba, nentanim-panahy avy aminy nivadika ho Kristiana nateraka indray ary lasa mpitory tamin'ny tena fiainana, dia nahatonga azy ho kristiana mpivavaka izay nitanisa matetika ny Baiboly.
Taorian'ny nandringanan'i Austin an'i Roberts tamin'ny famaranana tao anatin'ny efatra minitra sy valo amby roapolo segondra dia nitafatafa taminy i Dok Hendrix (fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Michael Hayes), teto no nanoloran'i Austin ny lahateny nahavariana izay homen'ny WWE taty aoriana ny fiandohan'ny vanim-potoana fihetsika.
ny fomba tsy dia mifampikasoka sy malahelo amin'ny fifandraisana
Ity ny lahatsarin'ilay kabary amin'ny fitambarany:
Araka ny hitanao amin'ny horonantsary, naneso ny finoan'i Jake Roberts i Austin, tamin'ny fanondroana ny Jaona 3:16 ary nilaza fa Austin 3:16 dia nilaza fa nokapohiko fotsiny ny borikinao!
Ny Jaona 3:16 no andininy malaza indrindra sy malaza indrindra avy amin'ny Baiboly Kristiana. Ny andininy dia mitovy hevitra amin'ny fampianaran'ny Kristianisma mihitsy ary matetika notononin'ny mpitory sy ny pretra.
Ity ny lahatsoratra feno ao amin'ny andininy Jaona 3:16 avy amin'ny Baiboly:
Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.
Ka rehefa tonga niaraka tamin'i Austin 3:16 i Austin nandritra ilay promo voalaza teo dia io ilay andininy noresahiny. Tsara ihany koa ny manamarika fa Jake Roberts dia nanonona ity andininy ity raha nanapaka ny promo tany ambadiky ny Austin talohan'ny lalao.
Avy hatrany am-bavan'ny soavaly, raha nanontaniana izy momba ny niandohan'ny Austin 3:16, dia izao no nolazain'i Stone Cold Steve Austin:
Ahoana ny fomba hampitsaharana ny filàna sy tsy fahatokisan-tena
Rehefa namboarina ny molotro taorian'ilay lalao nifanandrinako tamin'i Marc Mero dia nolazaina tamiko fa nanao resadresaka momba ahy momba ny Jaona 3:16 i Jake Roberts.
Fantatro ilay andininy, saingy tadidiko ihany koa fa amin'ny lalao baolina kitra dia misy hatrany ny mpankafy amin'ny faritra farany mitazona famantarana milaza ny Jaona 3:16.
Noho izany dia teny nalaina malaza be ny nanombohana azy, ary taorian'ny nandreseko ny fifaninanana dia tonga tamiko fotsiny izy io. Amiko, vintana madio ny nahatonga an'io Austin 3:16 ho lasa nanao io.
Nanazava ihany koa i Stone Cold Steve Austin fa na dia niresaka an'io Jaona 3:16 io aza izy ary naveriny tamin'ny Austin 3:16, dia tsy midika ho fanafintohinana ny Kristianisma na ny Baiboly, fa zavatra fotsiny no noeritreretiny teny an-dalana. ary avelao hivoaka izy.
Tao anatin'ilay resadresaka niarahan'ny WWE.com ihany no nilazany momba ny lafiny ara-pivavahana ao amin'ny Austin 3:16:
Rehefa nanao Austin 3:16 aho dia tsy natao hanohitra ny fivavahana na zavatra hafa. Raha ny marina dia tsy afaka milaza aminao aho hoe firy ny pretra sy masera nanontany ahy ny autographe ahy nandritra ny asako.
Tsy nisy zavatra masina momba izany. 'Austin 3:16' dia nilaza aho fa fatra-paminaniana ny borikinao dia faminaniana, ary lasa fehezan-teny mamaritra ny asako izany.
Mbola iray amin'ireo andianteny malaza indrindra amin'ny tantaran'ny WWE izy io, ary na iza na iza tsy tia azy dia mety mikorontana.
sarimihetsika tsara mampieritreritra anao
Ka izay ihany no dikan'ny Austin 3:16, tompokolahy sy tompokovavy. Zavatra iray izay nohazonin'i Austin haniratsira an'i Jake Roberts sy ny gimikan'ny pretra nandritra ny resadresaka taorian'ny lalao dia izay ihany!
Araka ny fantatsika rehetra ankehitriny, na izany aza, Austin 3:16 dia lasa, tsy isalasalana, ho teny malaza indrindra amin'ny tantara manontolo amin'ny tolona matihanina. Ny akanjo Austin 3:16 dia amidy toy ny mofomamy mafana mandritra ny tampon'ny vanim-potoanan'ny Attitude Era ary manohy manao izany, mandraka androany, amin'ny alàlan'ny WWEShop sy ireo mpiara-miasa aminy, na eo aza i Austin tsy eo amin'ny efijery intsony.
Stone Cold Steve Austin dia ara-dalàna ny angano bonafide an'ny orinasa Wrestling. Nentina tao amin'ny Hall of Fame WWE izy tamin'ny taona 2009, tsy iza fa i Vince McMahon tenany ihany ary manohy manintona sy manome aingam-panahy ireo mpankafy ady amin'ny matihanina tsy tambo isaina ary koa ireo mpikomy vaovao.
Ity misy horonantsary misy WWE Superstars maro ankehitriny izay mamerina mamerina ilay promo Austin 3:16 ratsy laza!
Raha te-hisambotra an'i Stone Cold Steve Austin ianao dia azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanoratana ao amin'ny podcast-ny, The Steve Austin Show izay miresaka momba ny lohahevitra marobe ao anatin'izany ny tolona matihanina sy ny dinidinika ho an'ny mpihetsiketsika avy amin'ny lafivalon'ny planeta.
Raha manana fanontaniana hafa momba an'i Austin na Austin 3:16 ianao dia aza misalasala manontany azy ireo amin'ireo hevitra etsy ambany!
zavatra tsara indrindra hatao rehefa leo
ny fomba hampiarahana ny fiainako
inona no dikan'ny hoe manao tetikasa amin'ny olona iray
teny hamaritana hoe iza ianao
maninona ny sipako no tsy te handany fotoana miaraka amiko
ny fomba hitondrana andraikitra eo amin'ny fiainana